Shirkadaha Xiriirka Dadweynaha waxay diyaar u yihiin inay ka faa'iideystaan ​​Baraha Bulshada | Martech Zone
Jimcaha, Agoosto 21, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Iyada oo qoraalkeygii ugu dambeeyay dhaleeceyn Brody PR, waxaad u maleyn kartaa inaan ahay nin baraha bulshada ku neceb shirkadaha PR. Taasi xaqiiqda kama fogaan karto. Waxaan si fudud ugu dhajin lahaa qoraal baloog ah oo ku saabsan wakaaladda warbaahinta bulshada haddii ay wax la mid ah sameeyeen.
Kyle Lacy ayaa qaatay a sii talaabo, sheegashada,
Haddii shirkaddaada xiriirka dadweynaha aysan qorin, hadleyn, waxna ku barin macaamiishooda sida loo isticmaalo warbaahinta bulshada maareynta sumadda ama xiriirka? goobta ku shid.
Si xushmad leh, kuma raacsani Kyle.
Dagaalku uma dhexeeyo Xiriirka Dadweynaha iyo Warbaahinta Bulshada, weli waxaan qiimeynayaa khibradda uu Xiriirka Dadweynaha miiska u soo saaro. Khabiir ku takhasusay warbaahinta bulshada (oo kulligoodna waan la tartami lahaa) ayaa diyaar u ah inay ka faa'iideystaan ​​dhexdhexaadiyayaashan si ka wanaagsan hay'adda PR ee fahamsan sida si wax ku ool ah loola xiriiro loona dhiso istiraatiijiyado isgaarsiineed oo lala yeesho dadweynaha, ka shaqeynta iyo dibedda.
Mid ka mid ah waxaan nahay ragga warbaahinta bulshada sii wadaya inaan iloobo ayaa ah inaan ku jirno dadka laga tirada badan yahay. Xiriirka dadweynaha waa ninka weyn - wali wuu jiidayaa xarigga wuxuuna dejinayaa codka shirkadaha ugu waaweyn adduunka. Shirkadaha xiriirka dadweynaha wali waxay sii wadaan inay natiijo fiican ka helaan ganacsiyadooda waana maalgashi weyn oo shirkadaha. Shirkadaha xiriirka dadweynaha waxaa si rasmi ah looga bartay isgaarsiinta wax ku oolka ah, dhexdhexaadinta, tabaha, iwm. Iyagu waa dad caqli badan oo caqli badan!
Waxaan si daacad ah u maleynayaa in Baraha Bulshada ay u egtahay in ay aad u buun-buuniso labadaba dhexdhexaadiyaasha iyo muhiimadayada. Ganacsatada waaweyn ee ka shaqeeyay suuqgeynta tooska ah, boostada tooska ah, suuq geynta keydka macluumaadka iyo daabacaadaha iyagu qaatay baraha bulshada ayaa jecel ka shaqeynta goobta maxaa yeelay way fududahay in la isticmaalo, si sahlan loo cabbiro, iyo qiimo jaban in loo beddelo jihada duulimaadka.
Dagaalka u dhexeeya shirkadaha xiriirka bulshada wuxuu u baahan yahay inuu maro dhinac dhinac ah iyo ragga warbaahinta bulshada sida Kyle iyo aniga waxaan u baahanahay inaan isku duubnaano, caawiyo, waxna ka barto. Waxaan rajeynayaa inaan wax ku baro shirkadaha PR-da waxyaabaha ku saabsan dhexdhexaadinta, otomaatiga iyo falanqaynta ay baraha bulshada ku bixin karaan tan iyo markii ay yihiin hel, waxay jeclaan doonaan natiijooyinka ay ka heli karaan iyo ku qanacsanaanta degdegga ah ee ay bixiso.
Taasi waa 2 senti ee Xiriirka Dadweynaha iyo Warbaahinta Bulshada!
Sawirka Kyle by Kyle Weller.
Tags: kyle lacyprxiriirka dadweynahawarbaahinta bulshada
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 8:58 PM
Sawirkaas Kyle waa wax laga naxo! haha.
Waan ku raacsanahay. Waxaan ka daalay "dadka baraha bulshada" waqti badan ku bixiya sidii aan qof walba uga dhaadhicin lahaa in baraha bulshada ay qiimo leeyihiin. Dadku waa inay ogaadaan hadda. Mararka qaarkood waxay u egtahay sida haddii aan qaadanno qaab difaac ka hor inta uusan qof xitaa na siinin diidmo isticmaalka warbaahinta bulshada. Waxaan waqti yar ku luminayaa xukunka iyo waqti badan oo aan ku bixiyo natiijooyinka kuwa horeyba indhaha u furay.
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 5:24 PM
Marka hore, waad ku mahadsan tahay isticmaalka sawirkaas. Waa mid ka mid ah khasnadaha qarsoon ee keydka sawirka. Marka labaad, waxaan rabaa inaan si cad u sheego inaanan kasoo horjeedin xiriirka dadweynaha haba yaraatee. Waxaan aaminsanahay in pr wali door weyn ka ciyaaro istiraatiijiyadaha isgaarsiinta. Waxaan kaliya isku dayayaa inaan sheego in haddii shirkaddaada xiriirka dadweynaha aysan ugu yaraan baarin suurtagalnimada adeegsiga warbaahinta bulshada aysan macaamiishooda u samaynaynin caddaalad buuxda. Waxaa jira shirkado badan oo ka jira sida Blast Media oo ku yaal Indianapolis kuwaas oo u adeegsanaya warbaahinta bulshada siyaabaha saxda ah. Waa inaad kudhex gasho internetka si aad uhesho isgaarsiinta taas oo ah mid aad muhiim u ah. Waxaan kaliya isku dayeynaa inaan dadka la xisaabtanno.
Qoraal wanaagsan, Doug. Waxaan ka cudurdaaranayaa wixii khalad ah ee aan ku qoro iPhone-kayga.
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 9:47 PM
Dood wanaagsan ayaa looga baahday dhanka PR, Kyle. Oo runtii waan u oggolaaday Brody inuu ku haysto qoraalkii ugu dambeeyay sidaa darteed waxaan doonayay inaan naftayda wax yar ka furto.
Waa sawir cabsi leh! Waxaan helay qaar kale oo qabow, sidoo kale…. qaasatan kan adiga kugu duudduuban oo xoogaa lugta gabadha ah… dhalaalaya. Waan ku dhawaaday inaan isticmaalo! Sawirada Google waa WACDARO!
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 9:26 PM
Waxaa igu kalifay inaan bilaabo bog wanaagsan oo la yiraahdo "Casharradii la Bartay" si dadka kale ay uga faa'iideystaan. Waad ku mahadsan tahay ii ogolaanshaha inaad ku darto xigashadaada. Halkan waa iskuxirka boostada, http://brodypr.blogspot.com/
Waan ku qanacsanahay ra'yigaaga.
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 5:33 PM
Robby. Weligaa kama baaqi doontid inaad la yaabto. Weli waxaan qabaa inaad adigu dooddo. 🙂
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 9:29 PM
Waa tan sida Bulshada Xiriirka Dadweynaha ee Mareykanka (PRSA) u qeexdo PR:
Xiriirka Dadweynaha waa go'an maamul, kormeerid, iyo shaqooyin farsamo oo kobciya awooda urur si istiraatiijiyad leh u dhageysto, u qaddariyo, ugana jawaab celiso dadka xiriirka wadaagga ah ee faa'iidada leh ay la leeyihiin hay'adda ay lagama maarmaan u tahay haddii ay tahay in la gaaro himiladeeda iyo qiyamkeeda.
Qeexitaankani waa mid qosol badan. Waxay tilmaamaysaa in PR loogu talagalay inay "kobciso isgaarsiinta istiraatiijiga ah" qof kasta oo muhiim u ah urur. Laakiin kuma guuleysan kartid himiladdan guud ahaan. Shaqaale kasta, macmiil kasta, shaqsi kasta wuxuu leeyahay awood uu kaga hadlo shirkaddaada markasta oo ay rabaan. Shirkadaha PR waxay saameyn weyn ku yeesheen aragtida dadweynaha iyagoo si xushmad leh ugu farsameeya fariimaha warbaahinta guud. Sare u kaca codka shakhsiyadeed ee qaabka warbaahinta bulshada waa dhacdo aan la joojin karin. Shirkaddu suurtagal kama rajeyn karto inay shaqaaleyso khubaro ku filan PR si ay ula xiriiraan malaayiin qof shaqsi ahaan.
Taas macnaheedu maaha PR waa bilaa qiimo. Si fudud, PR-kaasi oo ah "hawl istiraatiiji ah" kaliya wuxuu qiimo ku leeyahay adduunyada ay warbaahintu ka taliso rayiga dadweynaha Weli waxaan ku nool nahay adduunkaas, laakiin si dhakhso leh ayey u dhimanaysaa. Shabakadaha telefishannada, idaacadaha iyo wargeysyada ayaa meel walba ka kala dhacaya.
Tan ugu muhiimsani waxay tahay in PR ogyahay inay fashilmayso. Sida laga soo xigtay Edelman 2009 Trust Barometer (http://www.edelman.com/trust/), ”Target =” _ blank ”> www.edelman.com/trust/), 77% dadka Mareykanku waxay aaminaan shirkadaha yar ka badan sanad ka hor. Waxay sidoo kale soo sheegaan in kaliya 26% annaga dhab ahaan aan ku kalsoonahay bayaanka saxaafadda. Iyo habka - Edelman waa shirkadda ugu weyn PR ee adduunka!
Haddii dadka PR ay kaliya heli karaan 1/4 oo naga mid ah si aan u aaminno iyaga, waa inay si xun ugu xun yihiin shaqooyinkooda. Qiyaas haddii 1/4 saaxiibbadaa iyo qoyskaaga ay dhab ahaan ku kalsoon yihiin. Waxaa laga yaabaa in habka saxda ah ee shirkaduhu u dhisaan kalsoonida ulana xiriiraan shakhsiyaadka aysan ahayn iyada oo loo marayo weedho si taxaddar leh loo soo uruuriyay ee PR folks, laakiin iyada oo lagu dhiirrigeliyo shaqaalaha inay si dhab ah dadka ugala hadlaan waxa dhacaya. Taasi waxay dhisi kartaa xiriir waxtar leh, halkii mid ka mid ah lagu dhex wareejin lahaa.
Waxaan u maleynayaa in xiriirka dadweynaha uu door weyn ka ciyaarayo isla markaana uu aad ugu baahan yahay sidoo kale. faallooyin badan ayaa halkan ujeedo dood ah. gabi ahaanba waan ku raacsanahay iyaga waa inuu jiraa dood ku saabsan mowduucan. waxaa laga yaabaa inaan halkaan ka bilaabi karno doodda qoraalkan sidoo kale iyada oo loo marayo faallooyin sidoo kale. si markaa ay u dhacdo dood kooban dhamaanteen between sidoo kale qoraalkeeda wacan iyo waliba picka .. nasiib wacan
Waa hagaag, marka la eego mugga farriimaha suuq-geynta (oo 90% qashin ah) ee macaamiisha iyo ganacsatadu duqeynayaan, waa cadaalad in laga filo kuwa ka shakisan bal in baraha bulshada ay runti u shaqeyso ganacsigooda. Ilaa ay alaabtaadu u janjeedho dhinaca bulshada ee baraha bulshada, waxay u baahan tahay dadaal badan inaad wax uun soo jiidato, gaar ahaan haddii aad tahay nin yar oo leh summad aan la garanayn.
Sep 23, 2009 at 7: 43 PM
Waqti yar ayuu ku soo daahay xafladda, laakiin dhambaal weyn Doug (iyo mid is-hoosaysiiya taas oo nasteexo u leh inuu ka arko mid ka mid ah khubarada). Waan oggolahay, muranku wuxuu u baahan yahay in dhinac la iska dhigo; waxaa jira fursado aad u fiican oo banaanka yaala. Waxaan ka raaligelinayaa xagga hore inaan xoogaa dano gaar ah u adeego, laakiin annaga (RSW / US) waxaan dhameystirnay sahan, aragtida Hay'adaha iyo Macaamiisha ee ku saabsan muuqaalka bulshada / Dijital, oo si fiican u dhammaystiraya qoraalkaaga. Gaar ahaan, mid ka mid ah natiijooyinka:
Labada adeeg ee aasaasiga ah ee suuq-geynta ee la daraaseeyay, waxay umuuqataa in Shirkadaha PR ay lugta kuhayaan marka loo eego kartidooda / khibradooda maaraynta cabirka warbaahinta bulshada 60% Shirkadaha PR waxay sheegaan inay cabiraan baraha bulshada marka loo barbardhigo kaliya 49% Wakaaladaha Xayeysiiska iyo 45% Ganacsatada.
Ogsoonow in xogtan yar uun ay ka baxsan tahay macnaha guud, laakiin waxaad ku soo dejisan kartaa sahanka halkan: http://www.rswus.com/main/indexsurvey.php Waxaan rajeyneynaa inaad raacdo bartaada.
Tani waa sahan cajiib ah waxaanan uqaybiyay macaamiil aad ufarabadan iyo asxaabteyda! Aad baad ugu mahadsantahay wadaagidaada.